Izinqolobane Ezigcina Ukuzwela Eziphezulu (HSP) - U-Edwin Van Der Hoeven
Ukuzwela kuyithikithi lakho empilweni yokudala
Isigaba: Umuntu Ozwela Kakhulu (HSP)
Umuntu Ozwela Kakhulu ... noma Ukubona Okuzwela Kakhulu?
Abantu abaningi kwabangu-1 ungumuntu ozwela kakhulu (hsp). Njengabantu, i-High Sensitive Perception ivela ezinhlotsheni eziningi zezilwane emvelweni! Thatha ukuhlolwa kwe-hsp bese ufunda imininingwane eminingi mayelana nezici zokuzwela okuphezulu.
Ngubani noma yini umuntu ozwela kakhulu?
Ngamafuphi; nge-hsp, ubuchopho bucubungula imininingwane eyengeziwe yemizwa futhi ukhombisa ngokujulile kuyo. Umphumela wemvelo walokhu ukuthi uma ubona okuningi isikhathi eside, udinga futhi ukuphumula okusheshayo. Umuzwa wakho wezinzwa uqhakaza, uyinkimbinkimbi ngokwengeziwe, unesiphithiphithi ngokwengeziwe futhi uthola okuthile okusha njengokusha noma okuhlukile; ukhuthazeka kakhulu ngezikhuthazo kunomuntu ophakathi.
Ngakho-ke inezinhlangothi ezimbili:
Ukwazi okucashile ukwedlula abanye.
Awungeke ukhethe ukuba yi-hsp
Kungokwemvelo ngakho-ke akunabuhlobo obuqondile nengokomoya. Ngamanye amazwi; Ukuzwela okuphezulu kuzimele enkolweni noma ekuhlakanipheni nasekunengqondo. Kepha i-hsp-er imvamisa inamandla amakhulu okuzwela futhi izokhanga ngokushesha izikhonzi ezingokomoya ngokufuna kwakhe okungokwemvelo.
Ngabe uziqonda njengomuntu ozwela kakhulu?
Ingabe ukhungatheka kalula izinto ezinjengezibani ezikhanyayo, ukuhogela okunamandla, izindwangu zama-coarse noma ama-siren endaweni?
Ngabe ukuthola kunzima uma kuningi okumele ukwenze ngesikhathi esifushane?
Ngabe ufuna ukugwema ama-movie anobudlova nezinhlelo ze-TV?
Ngabe udinga ukuthatha umhlalaphansi embhedeni noma egumbini elimnyama noma endaweni lapho ungathola khona ubumfihlo kanye nokudambisa lesi simo ngezinsuku ezimatasa?
Ingabe ukwenza kube yinto ephambili ukuhlela impilo yakho ukuvikela izimo ezingezinhle noma ezokweqisa?
Ngabe ubona noma ujabulele amakha abuthakathaka noma obucayi, ukunambitheka, imisindo noma imisebenzi yobuciko?
Ingabe unayo impilo yangaphakathi ecebile futhi eyinkimbinkimbi?
Ngabe abazali bakho noma othisha bakubone uzwela noma unamahloni usengumntwana?
Kubalulekile ukwazi njengomuntu ozwela kakhulu
Isici sakho sijwayelekile
Kuthinta abantu abayi-15 kuye kwangama-20% - kakhulu ukuba yisifo, kepha akwenele ukuthi kuqondwe kahle yiningi lalabo abakuzungezile.
Eqinisweni, ososayensi bezinto eziphilayo bakutholile ezinhlotsheni ezingaphezu kwezingu-100 (futhi kungenzeka ukuthi ziningi ezinye), kusukela ezimpukeni zezithelo, izinyoni nezinhlanzi kuya ezinjeni, amakati, amahhashi nezinyamazane. Lesi sici sikhombisa uhlobo oluthile lwecebo lokusinda, ukukhumbula ngaphambi kokwenza. Ubuchopho babantu abazwela kakhulu (HSPs) empeleni busebenza ngokuhluka okuncane kunokwabanye.
Le ndawo akuyona into entsha, kepha ayiqondakali kahle
Ngoba ama-HSP akhetha ukubuka ngaphambi kokungena ezimweni ezintsha, kuvame ukubizwa ngokuthi 'amahloni'. Kodwa amahloni ayafundwa, hhayi okuzalwa nawo. Eqinisweni, ama-HSPs angama-30% akhishwe, yize isici sivame ukubizwa ngokuthi yi-introversion. Kubizwa nangokuthi ukuvimbela, ukukhathazeka, noma i-neuroticism. Amanye ama-HSP aziphatha ngalezi zindlela, kepha akuyona into yokuzalwa ukwenza lokhu hhayi uphawu oluyisisekelo.
Ukuzwela kubaluleka okuhlukile kumasiko ehlukene
Emasikweni lapho kungaziwa khona, ama-HSPs athambekele ekubeni nokuzethemba okuphansi. Batshelwa ukuthi 'ungazweli kakhulu' ukuze bazizwe bengajwayelekile.
umthombo: Elaine Aron - https://hsperson.com/
Izindatshana zakamuva kakhulu eziphathelene nokuzwela okuphezulu
I-18 Mashi, 2020
Fika lapho uya khona ukuzwela kwakho
I-8 Januwari, 2020
Ngiyezwa futhi ngibona konke, kepha kusho ukuthini?
I-3 Agasti, 2019
Uzimisele futhi ugcwele ukubekezela
I-10 Julayi, 2019
Ungahlala kanjani ume ezweni elikunqobayo
Kumthengisi wakhe wezwe othengisa kakhulu, Umuntu Ophakeme Ozwela Kakhulu: Ungaphumelela Kanjani Lapho Umhlaba Kukuhlula, umbhali u-Elaine Aron uchaza isici sobuntu esihlukile esithinta abaningi njengomuntu oyedwa kwabahlanu. Ngokusho kukaDkt. U-Aron, umuntu ozwela kakhulu (HSP) unesistimu yezinzwa ebucayi, uyazi ngobuqili endaweni yakhe, futhi ukhungatheka kalula endaweni evuselela kakhulu.
Kepha ikhwalithi eyinhloko ukuthi, uma kuqhathaniswa nama-80% ngaphandle kwesici, bacubungula konke okubazungezile kakhulu - kukhombisa, bacabange ngakho, benze izinhlangano. Lapho lokhu kucubungula kungazi ngokugcwele, kuvela njenge-intuition. Lokhu kubonisa isu lokusinda elijwayele izinhlobo eziningi, njalo lilungu elincane lamalungu alo.